MIANGATRA: firenena 80 ao anatin'izany ny UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba tsy misy lisitry ny dia!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » MIANGATRA: firenena 80 ao anatin'izany ny UK, UAE, France, Israel, Thailand, Aruba tsy misy lisitry ny dia!
Vaovao Momba ny Aruba • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Eswatini Breaking News • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Polynesia frantsay • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Momba ny Islandy • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Aza mandeha any Aruba, Eswatini, France, Islandy, Israel ary Thailand
Araka ny voalazan'ny CDC, ireo firenena voatondro ho "COVID-19 tena atahorana mafy" dia nanana tranga 500 isaky ny mponina 100,000 28 tao anatin'ny 7 andro lasa. Ny olom-pirenena amerikana dia tsy tokony handeha amin'ireo firenena ireo, raha tsy vita vaksiny tanteraka. Firenena XNUMX izao no nampiana an'io lisitra io.
Lisitr'ireo firenena 80 atahorana indrindra handehanana amin'izao fotoana izao araka ny CDC
Mampitandrina ny Amerikanina momba ny loza mety hitranga amin'ny dia rehefa mitsidika an'i Frantsa, Israel, Thailand, Aruba, Islandy ary Eswatini.
Ny CDC dia manavao ny lisitry ny toerana itera-doza indrindra, manampy toerana fitetezana sy fizahan-tany malaza 7 ho an'ny lisitra "fadio ny dia" sokajy 4. (fandrahonana lehibe indrindra).
Ny governemanta amerikana dia manome sosokevitra mafy fa ny Amerikanina vita vaksiny feno ihany no tokony handeha any Frantsa, Israel, Thailand, Aruba, Islandy ary Eswatini
The Ivotoerana amerikana misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) androany dia nanambara ny fampidirana firenena fito hafa ao amin'ny lisitra 'Level 4' amin'ireo fanjakana izay manambana ny loza mitatao indrindra ho an'ny mpitsidika.
Ao amin'ny torolàlana nomeny, ny CDC dia mamporisika ny fisorohana tanteraka ny dia mankany amin'ny toerana itodiana mitondra ny marika hoe "" Haavo 4: COVID-19 avo dia avo ", na dia ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka aza.
Araka ny voalazan'ny CDC, ireo firenena voatondro ho "COVID-19 tena atahorana mafy" dia nanana tranga 500 isaky ny mponina 100,000 28 tao anatin'ny XNUMX andro lasa.
Ireo firenena 7 vao natambatra tamin'ny CDC Lisitra "Haavo 4: COVID-19 avo dia avo" hatramin'ny 9 Aogositra 2021, dia:
4. Pôlinezia frantsay
Nilaza koa ny mpandrindra amerikana fa izay amerikana rehetra izay tsy maintsy mandeha any amin'ireny toerana ireny dia tokony hatao vaksiny feno.
“Ireo mpitsangatsangana vita vaksiny feno dia tsy dia mahazo ary manaparitaka COVID-19. Na izany aza, miteraka risika fanampiny ny dia iraisam-pirenena, ary na dia ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka aza dia mety hitombo ny risika mety hahazo azy ireo ary mety hanaparitaka karazana COVID-19 hafa, "hoy izy. CDC amin'ny fitarihany.
Tamin'ny herinandro lasa CDC nanampy firenena 16 ho an'ny sokajy risika "avo indrindra". Ny fikambanana dia manavao tsy tapaka ny lisitry ny fampandrenesana momba ny dia hatrany amin'ny haavo 1 ("ambany") mankany amin'ny haavo 4 ("avo dia avo").
Amin'izao fotoana izao, ny CDC dia mampitandrina ny olom-pirenena amerikana handeha amin'ny firenena sy faritra manaraka. Mahagaga fa ao anatin'izany ny Nosy Virgin US, izay ao Etazonia.
Ity ny lisitra feno an'ny firenena sokajy 4 araka ny Ivotoerana fanaraha-maso ny aretina any Etazonia.
AZA MITSANGARANA amin'ireo firenena 80 voatanisa:
Morten Litthau Jensen hoy:
11 Aogositra 2021 amin'ny 21:02
Ny firenena sasany izay tsy azonao aleha
Raha tsy hoe vita vaksiny tanteraka ny firenena sasany misy vaksiny indrindra eto an-tany.
Dr Basava hoy:
10 Aogositra 2021 amin'ny 20:32
Ary Russia sy Ukraine?
Mety ve ny fanaovana vaksiny feno?